ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် လက်ဝတ်ရတနာ အချောထည်ပြပွဲတွင် ကျေ? - Yangon Media Group
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် လက်ဝတ်ရတနာ အချောထည်ပြပွဲတွင် ကျေ?
ဒုတိယ အကြိမ်၊ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် လက်ဝတ်ရတနာအချောထည်ပြပွဲတွင် ကျောက်မျက်အလွတ်ရောင်းချခွင့်နှင့် လေလံတင်ရောင်းချခွင့် ပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့ကြောင်း ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များထံ မှ သိရသည်။ ”ကျောက်မျက်အလွတ်ရောင်း ချခွင့်ဆိုတာ ကျောက်မျက်အရိုင်း တုံးတွေကို ရောင်းချခွင့်ရတာပါ။အရင်က ရောင်းချခွင့်မရှိပါဘူး။ အခုပြပွဲမှာ ကျောက်မျက်တုံးတွေ ဝယ်သွားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာက တစ်ခါတည်းချိတ် ပိတ်ပေးလိုက်ပြီး သူ့နိုင်ငံကိုတစ် ခါတည်းသယ်ဆောင်သွာနိုင်မှာ ပါ”ဟု ရန်ကုန်တိုင်းကျောက်မျက် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တွဲဖက် ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဒေါ်ညွှန့်ညွှန့်ခိုင် ကပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုး ရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ”ဒီနေ့ဟာ ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ကျောက်မျက်ရတနာ ပြပွဲနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းပြီး ဆောင်ရွက်နိုင် ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင် များအသင်း (ရန်ကုန်)ရဲ့ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ထားမှုအပေါ်မှာ အသိ အမှတ်ပြုပါတယ်။ ဒီဆောင်ရွက် မှုတွေဟာ နိုင်ငံအတွက် အလွန် အင်မတန်ကို အကျိုးဖြစ်ထွန်း ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဒီလိုပြပွဲတွေကို တိုးမြှင့်ပြီးဆောင် ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာ အလယ်မှာ ရင်ပေါင်တန်းရပ် တည်နိုင်မယ်။ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ကဏ္ဍကို ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
အလုပ်ခွင် တည်မြဲရေး တောင်းဆိုနေသည့် အုတ်ကျင်းဂုန်နီအိတ် စက်ရုံလုပ်သား ၃ဝဝ ကျော်က သုံးပွင်??
ကမ္ဘာကြီး၏ အပြင်ဘက် အာကာသတွင် လက်နက်များ ချမထားရေး ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ကို ပါကစ္စတန်နှင့် ရုရ?
အက်ဇ်ပလီကျူတာကို ခေါင်းဖြင့် တိုက်ခဲ့သော်လည်း ဟယ်ရီကိန်း အရေးယူခံရမည် မဟုတ်
ဆန်စပါးလုပ်ငန်းကို တရုတ်အစိုးရပိုင် CITIC Construction နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး?
မိုးညှင်းမြို့နယ် အုန်းစံဆိုင်ကျေးရွာ၌ တစ်နာရီခန့်ကြာ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူနေအိမ် ၂၂ လုံးပျက်စီး